सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिए पछाडि हट्दिन : कुलमान घिसिङ « गोर्खाली खबर डटकम
सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिए पछाडि हट्दिन : कुलमान घिसिङ
२०७७ भाद्र ९ गते मङ्गलवार प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको पहिलो कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । २०७३ साद भदौ २९ गतेबाट विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसंँगै देश १८ घण्टाको लोडसेडिङ्गट मुक्त भएर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा सम्म पुगेको छ ।
यहो अवधिमा थुप्रै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने ,उत्पादन बढाउने र कतिपय योजनाहरु सम्पन्न भएका छन त कतिपय योजना उत्पादन दिने तयारीमा छन । त्यति मात्रै होइन उनको कार्याकाल अघि प्राधिकरणको ३४ अर्ब संचित घाटाबाट उकासिएर अहिले प्राधिकरण अर्बौ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।
घिसिङ्गकै नेतृत्वमा रहँदै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३—७४ देखि नाफा गर्न सुरु गरेको हो। त्यसपछि क्रमशः नाफा वृद्धि गर्दै आएको छ। जसअनुसार आव २०७४—७५ मा दुई अर्ब ८५ करोड, आव २०७५—७६ मा नौ अर्ब ८१ करोड र आव ७०७६—७७ मा हालसम्मकै उच्च रु. ११ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ नाफामा रहेको छ।
कुनैपनि संस्थामा एउटै व्यक्ति सधै रहने भन्ने हुदैन । संभव पनि हुदैन । यो नियमित प्रक्रिया हो । यसकारणपनि मलाई मेरो कार्यकाल सकिदैछ भन्नेमा चिन्ता छैन । तर अधुरा योजनाहरु पुरा कहिले होलान । नेपाल आत्मनिर्भर भएर विद्युत निर्यात गर्ने मुलुक कहिले बन्छ भन्ने चिन्ता छ ।
यसमा मैले गरेका मेरो नेतृत्वबाट भएका कामहरुबाट आम जनता खुशी हुनुहुन्छ । सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मैले एउटा सिष्टम बसाएको छु र हाम्रो टीमबाट आज देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको छ । अब फेरी जनताहरु लोडसेडिङ्गको चपेटामा नपरुन भन्ने मेरो अपेक्षा छ । तर मलाई अरु कार्यालय संस्थाहरुबाट जसरी उच्च अधिकारीहरुले अवकाश लिन्छन । त्यही अनुभव भईरहेको छ ।
कुनैपनि काममा सफल हुन त्यस भित्रको व्यवस्थापन बलियो र राम्रो हुनुपर्छ । अर्कोकुरा आफ्नो लक्ष्य, उद्धेश्य जिम्मेवारी के हो ? त्यसमा दृढविश्वास हुनुपर्छ । जलश्रोतको धनी देश हामी आफै त्यतिबेला चरम लोडसेडिङ्गको मारमा थियौ । नेपाली जनताले दुःख पाईरहेका थिए ।
देशमा उद्योग कलकारखाना सबै धराशायी अवस्था थियो । नयांँ उद्योगधन्दामा लगानी गर्न कोही पनि तम्तयार थिएनन। म प्राधिकरण तल्लोस्तरको कर्मचारी देखि हालसम्म आउंँदा मैले थुप्रै अनुभव बटुलेको थिएँ । नशा नशामा मेरो शरीरमा विजुली बगिरहेको हुन्थ्यो । यस अवधिमा समस्या केहो र कमजोरी कहांँ छ भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाईसकेको थिएंँ । अर्को कुरा ममा दृढ इच्छाशक्ति र अठोट थियो ।
जसरीपनि देशलाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त बनाउंँछु भन्ने । सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउंँदै गएँ । सबै मेरा कार्यालयका अधिकारी लगायतको टीम बनाएर लगें ।
आज हरिशयनी एकादशी: घर आँगनमा तुलसीको विरुवा रोपिंदै